Akhri: Khilaafka Wasaaradda Waxbarashada & Dalladaha oo cirka isku shareeray * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 Last updated May 14, 2015
Mareeg.com: Khilaaf u dhaxeeya Wasaaradda Waxbarashada iyo Hiddaha iyo Tacliinta Sare Soomaaliya iyo Dalladaha Waxbarashada Ahliga ah ayaa cirka isku sii shareeraya.
Khilaafka ayaa salka ku haya Imtixaan wasaaraddu dooneyso in 30-ka bishaan May 2015 laga qaado ardayda dugsiyada sare, gaar ahaan kuwa Fasalka 12-aad ee qalin jebinaya.
7-dii bishaan May, dalladaha Waxbarashada ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay ineysan xilligaan suuragl aheyn in wasaaraddu qaaddo Imtixaan mideysan oo shahaadi ah, hase ahaatee waxaa go’aankaas aan dheg jalaq u siinin wasaaradda oo shalay (13 May) soo saartay warqad ku socota Iskuullada, Waalidiinta iyo Ardayda, loogun sheegayo in imtixaanka la galo.
Sida ku cad warqadda kasoo baxday xafiiska Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Xaamud Cali Xasan, waxaa meesha ka baxay xiriirkii ka dhaxeeyey wasaaradda iyo Dalladaha, waxaana wasaaradduu qoraalkeeda oo warbaahinta la mariyey ku hagaajisay Dugsiyada, Waalidiinta iyo ardayda, waxaana la xusin dalladaha.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo aanuu hoos imaanin 1 Iskuul sare oo shaqeeya ayaa rabta iney dhinac marto Dallado dalka kasoo shaqeynayey muddo ka badan 20 sano, tiiyoo ay dheertahay iyadoo aan weli la sameyn xeer qeexaya sida lagu dhaqmayo Waxbarashada gaarka loo leeyahay.
Maxey Dalladuhu ku sababeeyeen diidmada Imtixaanka Wasaaradda?
Dalladaha ayaa sheegay iney 6 sababood uga joogsadeen imtixaanka ay waddo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo la qorsheeyey 30-ka bisha May.
Sanadkaan wasaaradda Waxbarashadu ma kormeerin Iskuullada ay dooneyso iney ardadooda shahaadiga imtixaanka ka qaaddo, taas ayaana yaab ku noqotay Iskuullada iyo waalidiinta.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in wasaaraddu lafteedu dharegsantahay caqabadaha jira, balse la higsanayo ballanqaad maaliyadeed oo ay sameeyeen Hay’ado ajanbi ah.
Markii ay dalladuhu diideen Imtixaanka, wasaaraddu ma tegi Iskuullada, waxeyna foomka lagu buuxinayo macluumaadka ardayga ku amartay in lagala baxo bogga ay ku leedahay Internet-ka.
Sanadihii ugu dambeeyey, dalladaha ayaa qaadi jiray Imtixaanka dugsiyadooda, waxaana wasaaradda dallad kasta u gudbin jirtay liska ardayda soo qalin jibeiyey.
Dalladaha ayaa ardayga siin jiray shahaadada dugsiga sare iydoo ka qaadda $30 dollar, waxaana ardayaga raba debadda uu shahaadada dalladda geyn jiray wasaaradda Waxbarashada oo u soo saari jirtay Shahaado ay leedahay, balse ay ku yaalaan boondoonyinka shahaadda dalladda.
Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa iyaduna ardayda ka qalinjebiyey dugsiga sare ka qaadi jiray $30 dollar, iyadoo markii shaabadeyneyso wasaraaddaa arrimaha debadda ay ka qaadato ardayga $15.
Khilaafkan ayaa halis gelin kara mustaqbalka kumannaan arday ah oo sanadkaan ka qalin jebinaya dugsiyada sare ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, lamana oga dhinaca tanaasuli doona.
Waa tan warqadda shalay kasoo baxday wasaarradda Waxbarashada Soomaaliya